Chinangwa cheshoko rakauya nemutumwa wechinomwe
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Chinangwa cheshoko rakauya nemutumwa wechinomwe
Chinangwa cheshoko rakauya nemutumwa wechinomwe
Vanhu vazhinji vanotenda kuti kune shoko rine chiprofita rakanangana nemwenga waJesu Kristu munguva yekupedzisira. Vanoti mutumwa wechinomwe ariko pakudzosera vanhu kuShoko raMwari, uyezve izwi rimwe nerimwe richataurwa nemutumwa wechinomwe rakaringana neShoko raMwari (Bhaibheri). Nemamwe mazwi izwi rega rega remutumwa wechinomwe “iShoko raMwari rakavandudzwa”. Hama Branham vakataura kutaura kunotevera:
496 Chiedza chemadeko chinobudireiko? Chiedza chemadeko basa racho nderei? kuvandudza. Umm! Mazvinzwisisa here? [ungano inoti “Amen”-Ed] chiedza chemadeko chaiita basa rimwechete nechiedza chemangwanani, kuvandudza chinhu chaive chagurirwa panzira neNguva yerima, kupfurikidza Roma. Mwari vachavandudza, nekupenyesa chiedza chemadeko, (Chii?) kuvandudza Shoko raMwari rese zvakare, kuzviratidza kuzere kwaKristu mukereke make zvakare. Zvese zvaakaita, nenzira yaakazviita nayo, zvichave zvakare muchiedza chemadeko. Muri kuona zvandiri kutaura here? Oh, hazvina kunaka here izvi? [“Amen.”] Zivai kuti tiri kurarama pano kuti tizvione parizvino, chiedza chemadeko, zvirokwazvo sezvazvakarehwa muchiporofita. Chiedza chemadeko chiri kuuya kuzovandudza chii? Kuzovandudza zvakadyiwa nehudyi.
62-0422 KUVANDUDZWA KWEMUTI WEMWENGA JEFFERSONVILLE IN. V-3 N-15 SVONDO
Ngatitarirei kuti Magwaro anotii panyaya iyi:
MARAKI 4:6 Iye achadzorera mwoyo yemadzibaba kuvana, nemwoyo yavana kuna madzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka
Tikaongorora vhesi iri, ngatidudzirei mazwi makuri zvichibva muBhaibheri.
Kuti kudzorera zvinorevei muBhaibheri?
EZEKIERI 14:6 Naizvozvo iti kuimba yaIsraeri, 'Zvanzi naIshe Jehova; dzokai, mufuratire zvifananidzo zvenyu, mufuratidze zvinonyangadza zvenyu zvose zviso zvenyu.'
RUKA 17:4 Kunyange akutadzira kanomwe nezuva rimwe, akadzokera kwauri kanomwe achiti ndatendeuka; umukanganwire.
MABASA AVAPOSITORA 26:20 Asi ndakatanga kuparidza kuna veDhamasiko, nokunaveJerusarema, nenyika yose yejudhea, nekuvahedheni, kuti vatendevuke, varingire kuna Mwari, vaite mabasa akafanira kutendevuka.
Mubhuku raZvakazarurwa chaputa 3 Mweya wakaranga kereke ukaisiya nesarudzo imwechete:
Kudzoka zvinoreva kutofuratira woenda nerumwe rutivi rwakasiyana nerwawanga wakananga. Bhaibheri rinoyananisa “kudzoka” “nekutendevuka”, zvichireva kuti kufuratira zvauri kutenda mazviri nhasi uno nemararamiro auri kuita uchienda kunoita zvinorairwa neShoko (Bhaibheri) kuti uite.
Izwi rekuti “kudzoka” rinoyanana zvakare nerekuti “kutendeuka” kana kuti “kudzokera” pachidanho chawakatanga uri. Izwi iri muchihebheru nderekuti “shuwb” zvichireva “kutendeuka” kana kuti “kudzokera”. Vadzidzi vaJesu nekuziva vhesi iri riri kuna Maraki 4:6 vakamubvunza nezvaro Jesu akadaira:
MATEO 17:10 Vadzidzi vakamubvunza, vachiti, vanyori vanotaurireiko vachiti, Eria unofanira kutanga kuuya?
11 Akapindura, akati, Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Nekudaro tinokwanisa kupendera tichiti kuna Maraki 4:6 madzibaba aifanira kutendeuka (vofuratira mararamiro avo avairarama ipapo uye vofuratira zvavaitenda mazviri) votendeukira kukutenda kutsva uye nzira yekurarama itsva yakadzidziswa naJesu paakauya pekutanga. Panguva iyoyo vhesi iri riri kuna Maraki raive rakatonyorwa kare, dzidziso dzaJesu dzichiri muhupenyu hwaizotevera, asi mukurarama kwedu kwanhasi zvave mune zvakadarika. Vana (mune ramagwana) vaifanira kutendeuka, uye vodzokera kunzira yehupenyu nekutenda kwakauya naJesu akapa kukereke yekutanga munguva yakadarika. Saka vana vanofanira kutendeukira kune zvekutanga.
Kuti mwoyo zvinorevei muBhaibheri?
Unofanira kuda Mwari nemoyo wako wose kuitira kuti Shoko raMwari rigare mumoyo wako. Kana moyo wako usingafambise ropa hakuna nhengo yemuviri wako inokwanisa kugamuchira mweya wekufema kuitira kuti irambe ichishanda. Kana Shoko raMwari rikagara mumoyo mako zvinokwanisa kufambiswa nenhengo dzese dzemuviri wako kuti unamate zita raMwari. Murairo wekutanga mukuru muBhaibheri ndewekuti:
DEUTERONOMIO 6:5 Ude JEHOVA Mwari wako nomoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose.
6 Zvino mashoko awa andinokuraira nhasi, anofanira kuva mumoyo mako.
MATEO 22:36 Mudzidzisi, murairo mukuru pamirairo ndoupiko?
37 Akati kwaari, Ida Ishe, Mwari wako, nomoyo wako wose, nomweya wako wese, nokufunga kwako kwose.
38 Ndiwo murairo mukuru nowokutanga.
JOERE 2:12 Kunyange zvakadaro ndizvo zvinotaura JEHOVA naizvozvo tendeukirai kwandiri nemwoyo yenyu yose, muchizvinyima zvekudya, muchichema nokuungudza.
13 Bvarurai mwoyo yenyu, murege kubvarura nguwo dzenyu, mutendeukire kuna JEHOVA Mwari wenyu; nokuti ane ngoni nenyasha, anononoka kutsamwa, ane tsitsi zhinji, uye anozvidemba pakuitira vanhu zvakaipa.
Mwoyo unotsanangura kutenda kwemukati kuri pamweya (kuvimba), kuzvidzora, kuda uye kufunga kwemunhu wemukati.
MATEO 15:17 Hamunzwisisi here kuti zvose zvinopinda mumuromo, zvinoenda mudumbu, zvikazorashwa kunze?
18 Asi zvinobuda mumuromo zvinobva mumoyo; ndizvo zvinosvibisa munhu.
19 Nokuti mumwoyo munobuda mifungo yakaipa, nokuvuraya, novufeve, novupombwe, nokuba, nokupupura nhema nokumhura Mwari.
Zvakadaro ukatevera Kristu semurairo usina kuzvipira nekuzvidira kubva mumoyo mako kuti umubatire nezvese zvako, zvese hazvina maturo.
VAEFESO 6:5 Imi varanda, tererai avo vari vatenzi venyu panyama, nokutya nokudedera, nomwoyo yakarurama, muchizviita sokuna Kristu.
6 Musingabati kana muchionekwa bedzi, savafadzi vavanhu, asi savaranda vaKristu, vanoita kuda kwaMwari nomwoyo wose;
Izwi iri mune rimwe vhesi riri kutaura “moyo” mumwechete kwete “mwoyo” yakawanda zvichireva kuti ndicho chinhu chaigovana madzibaba chinoonekwa zvikuru. Kune madzibaba mazhinji asi moyo mumwechete.
MABASA AVAPOSITORA 4:32 Zvino vazhinji vavaitenda vaive nomoyo mumwe nomweya mumwe; kwakanga kusinomumwe waiti chimwe chaaiva nacho ndechake, asi zvinhu zvose vakati ndezvavose.
Naizvozvo madzibaba navana vaifanira kufuratidza kutenda kwavo kwemukati kuda kwavo uye kurangarira kwavo votarisa nekutenda kudzidziso yaKristu.
EZEKIERI 11:19 Ndichavapa moyo mumwe, nokuisa mweya mutsva mukati menyu; ndichabvisa moyo webwe munyama yavo, ndokuvapa moyo wenyama.
Chii chinhu chimwe chingava navose madzibaba nevana vavo chine kubata kukuru pakurarama kwavo kwese chinorarama nguva inopfuura zera rimwechete?
Zvavanotenda! Ndicho chinhu chimwe chavanacho vose saka zvakadaro chinhu ichi kutenda.
Kumadzibaba, shoko apo Jesu paaive pasi raive:
MAKO 1:15 Achiti, nguva yazadziswa, vushe bwaMwari bwaswedera pedo. Tendevukai mutende Evangeri.
Izwi rekuti kutenda (faith) rakataurwa kaviri chete muTestamente Yekare. Kumadzibaba yaive shaduko huru kwazvo. Vaive vagara vachirarama pasi pemitemo yeMurairo apa vaive vakufanira kurarama nekutenda chakava chinhu chitsva kwazvo kwavari. Asi Jesu akaratidza madzibaba kuti ruponeso rwavo rwaisazobva pamurairo. Asi rwaibva pasungano yakaitwa kuna Abrahama naMwari yaizopa mudzikinuri wavaizotenda maari kuti vawane kupona. NaKristuvo zvaakararama asina kana chivi ndiko kwaive kuzadziswa kwemurairo wavo.
VAGARATIA 3:16 Zvino izvo zvipikirwa zvakarehwa kuna Abrahama nokumwana wake. Haarevi, achiti: Kuvana vako, savanenge vari vazhinji; asi saanenge ari mumwe, unoti; kumwana wako; uyu ndiye Kristu.
17 Zvino ndinoreva chinhu ichi, ndichiti; sungano yakasimbiswa kare naMwari muna Kristu, haitorerwi simba nomurairo wakazotevera makore mazana mana namakumi matatu apfuura, kuti chipikirwa chikoneswe.
18 Nokuti kana nhaka ichibva kumurairo, haichabvi kuchipikirwa;; asi Mwari wakaipa Abrahama nokupikira.
19 Naizvozvo murairo chinyiko? Wakazowedzerwa nokuda kwezvivi, kusvikira mwana wakapikirwa izvozvo achizovuya; iwo wakarairwa navatumwa noruvoko rwomurevereri.
20 Zvino murevereri haazi womumwechete, asi Mwari ndomumwe.
21 Ko murairo unorwiisana nezvipikirwa zvaMwari here? Haisva! Nokuti dai vakanga vapiwa murairo waigona kuraramisa, zvirokwazvo Kururamiswa kungadai kwakabva kumurairo.
22 Asi rugwaro rwakapfigira zvose pasi pezvivi, kuti chipikirwa chinobva pakutenda munaJesu Kristu chipiwe vanotenda.
23 Asi kutenda kusati kwasvika, taichengetwa pasi pemirairo, takapfigirwa nokuda kwokutenda kwaizoratidzwa.
24 Saizvozvo murairo wakanga uri muperekedzi wedu, kutiisa kuna Kristu, kuti tiruramiswe nokutenda.
25 Zvino kutenda zvakwakasvika, hatichiri pasi pomuperekedzi.
Kuvana vakamirira kuuya kwaKristu kwechipiri shoko rinoti:
RUKA 18:8 ... asi kunyangwe zvakadaro Mwanakomana wemunhu kana asvika, uchawana kutenda panyika here?
Vanhu vakawanda nhasi uno vanoti vatendi vaJesu Kristu asi hupenyu hwavo nemabasa avo hazvibereki zvibereko zvehupenyu hwechiKristu.
MATEO 7:21 Havazi vose vanoti kwandiri Ishe, Ishe vachapinda muhushe hwokudenga. Asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga.
Kuvatendi nhasi uno (vana) hausi mubvunzo wekuti vanotenda here kana kutaura kuti vanotenda, chaunotenda machiri. Kana uchitenda pachokwadi uine kutenda kunotaurwa neBhaibheri, zvino nzira dzako nemararamiro ako zvinozoratidza izvozvo.
JAKOBO 2:18 Asi mumwe ungati; iwe unokutenda, neni ndinamabasa; ndiratidze kutenda kwako kusine mabasa, neni ndigokuratidza mabasa angu kutenda kwangu.
Tingadaro tiine kutenda, asi tine kutenda kumwechete kwaive nemadzibaba edu here? Nekuti ndiko kutenda kwega kuchadiwa naMwari pakugamuchira mwenga wake. Kana tikange tiine kutenda chaiko tinozoita mabasa mamwechete akaitwa nemadzibaba edu vakaita zvavaitenda mune zviitiko zvose zvehupenyu uye mukurumbidza nekunamata Mwari.
Ndivanani madzibaba uye ndivanani vana?
Kune zvikwata zviviri zvemadzibaba zvakataurwa muvhesi iri. Denderedzwa rekufambiswa kwechiKristu rakaturikira vhesi irori kuti rinoyanana nemhuri yechero musha wamunenge mapiwa. Asi tikanyatsotarisisa pavhesi iri rinoreva chikamu chekutanga apo madzibaba anodzoka kuvana (kwete vana) uye muchikamu chechipiri vana vachidzoka kumadzibaba avo. Saka pane hukama chaihwo pakati pevana nemadzibaba pachikamu chechipiri chevhesi asi hapana hukama pakati pemadzibaba nevana pachikamu chekutanga pavhesi iri. Tichienda mberi Ruka 1:17 naMateo 17:11 anoratidza kuti chikamu chevhesi iri chakazadziswa muhushumiri hwaJohane Mubapatidzi.
RUKA 1:17 Uchafamba pamberi pake noMweya nesimba raEria, kuti adzorere moyo yamadzibaba kuvana navasingateereri kuvuchenjeri bwakarurama agadzirire Ishe, vanhu vakamugadzirirwa kwazvo.
Chikamu chechipiri chaMaraki 4:6 chichazadziswa nguva inotevera.
MATEO 17:11 Akapindura, akati, Eria achauya hake, avandudze zvinhu zvose.
12 Asi ndinoti kwamuri: Eria wakatosvika, asi havana kumuziva; asi vakamuitira pavanoda napo. Saizvozvo vo Mwanakomana womunhu uchabva watambudzwa navo.
MATEO 11:14 Kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria wakanga uchinzi unovuya.
Kune chirevo chakadzama pamweya chinorehwa nevhesi iri kupinda kureva zviri mumhuri imwechete. Vhesi iri chiporofita chinotaura nezvekuuya kwaEria kuuya kwaJesu Kristu kwekutanga kusati kwaitika uye kuuya kwaEria Jesu Kristu asati adzoka kechipiri. Sezvaingotendwa nemaJuda kuti kuuya kwaMesiah kuchava muchiitiko chimwechete, saka vanhu nhasi uno havaonewo kune kuuya kwaEria kuviri .
Mumwe muenzaniso wekuzadziswa kwechiporofita kaviri muMagwaro kuri kuna Ruka 4:18 naIsaya 61:1
ISAYA 61:1 Mweya waShe Jehova uri pamusoro pangu; nokuti Jehova wakandizodza kuti ndiparidzire vanyoro mashoko akanaka; akandituma kuti ndirape vane moyo yakaputsika, kuti ndiparidzire vakatapwa kusunungurwa, nokuna vakasungwa kuti vachazarurirwa;
2 Kuti ndiparidzire Gore rengoni dzaJEHOVA, nezuva rekutsiva raMwari wedu; kuti ndinyaradze vose vanochema;
RUKA 4:18 Mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza, kuti ndiparidzire varombo Evangeri; wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo; namapofu kuti vavonezve; ndiregedze vakatsikirirwa;
Zuva rekutsiva riri munguva inouya, nekuti zuva raShe ndiyo nguva yekutambudzika kukuru.
Saka madzibaba aya nevana vavo ndivanani? Tinoda kuziva madzibaba nevana munguva yakadarika pakati penguva yekuuya kwaJesu Kristu kwekutanga.
VAROMA 9:4 Ndivo vaIsraeri; kuitwa vana nokubwinya, nesungano, nokupiwa murairo, nokunamata Mwari, nezvipikirwa, ndezvavo;
5 Madzibaba ndaavo, naKristu wakabva kwavari panyama, uri pamusoro pavose, Mwari unokudzwa nokusingaperi. Amen
Bhaibheri rinoti madzibaba aiveko panguva yakauya Jesu pekutanga ndivo vaIsraeri. Saka madzibaba ekutanga muvhesi ndivo vatungamiriri vavaIsraeri vaive vapenyu panguva yaJesu sezvo vachizvidaidza kuti “Vana vaAbrahama”, baba vokutanga vavaIsraeri.
MATEO 3:9 Musafunga kutaura mumoyo menyu muchiti, Abrahama ndibaba vedu, nokuti ndinoti kwamuri Mwari ungamutsire Abrahama vana pamabwe awa.
VaIsraeri vaifanira kutendeukira kunaJesu navadzidzi vake vaive varume vechidiki zvichienzaniswa nevatungamiriri vavaIsraeri saka vaionekwa sevana vavo.
MABASA AVAPOSITORA 13:32 Zvino tinokuparidzirai mashoko emufaro kuti chipikirwa chakaitwa kumadzibaba edu.
33 Kuti Mwari wakachizadzisa kwatiri isu vana vavo, wakasimudzazve Jesu sezvazvakanyorwa mupisarema rechipiri ndiwe mwanakomana wangu nhasi ndakubereka.
JOHANE 13:33 Vana vaduku, ndichiri nemi chinguva chiduku; muchanditsvaka, asi sezvandakareva kuvaJuda, ndichiti; Pandinoenda imi hamungavuyipo, saizvozvo, zvino ndinoreva kwamuri vo.
Vadzidzi vaJesu apo paaive panyika pakuvuya kwake kwekutanga ndivo vaive “vana” muchikamu chekutanga chaMaraki 4:6
VAGARATIA 4:19 Vana vangu vaduku, vandinotamburira zve kubereka, kusvika Kristu avumbwa mukati menyu.
3 JOHANE 1:4 Handino mufaro unopfuura uyu, wokuti ndinzwe kuti vana vangu vanofamba muzvokwadi.
Vose Pauro naJohane vanodaidza vadzidzi vaKristu pasi pedzidziso dzavo vakavashandura kuti “vana”. Tinoziva kuti Pauro aive asina kuwana uye aive asina vana. Sekuna vaGaratia 4:19 ava ndivo vadzidzi vaJesu Kristu vakatendeutswa. Vadzidzi avo sevarume vechidiki vaive “vana” kuvatungamiriri vavaIsraeri vakazenge vakura kuva madzibaba ekereke yekutanga sezvo vaiona vanhu vavaive vatendeutsa sevana.
Vadzidzi vaive ndivo vana nekuti vaive varume vechidiki panguva yekuuya kwaKristu kwekutanga, asi vakazokura kuva madzibaba emaKristu aive atendeuka saka zvakadaro ndivo madzibaba emaKristu ose anotenda kudidziso dzavo. Kereke yakarasika mukufamba kwenguva ikabva padzidziso dzeTestamente Itsva vachidzidzisa vanhu kuti vatevere dzidziso dzevanhu vavaiona vari vakuru pamberi pavo. Saka vakatombozvidaidza kuti vekwaLuther, vekwaWesley nevamwe vakadaro, kuti varatidze kuti vanababa vavo pamweya ndivanani. Nhasi uno Mwari ari kutsvaga kereke inodzidziswa dzidziso dzavapositora kuitira kuti vatendi ivavo vanova vana vemapositora ekutanga uye havazoteveri vanhu vanotungamirira panguva yavanorarama ivo.
VAROMA 8:15 Nokuti hamuna kupiwa mweya wovuranda kuti mutye zve, asi makapiwa mweya wokuitwa vana, watinodana nawo, tichiti: Aba Baba.
16 Mweya amene unopupurirana nomweya wedu, kuti tiri vana vaMwari.
17 Zvino kana tiri vana, tiri vadyi venhaka; vadyi venhaka yaMwari, vadyi venhaka pamwechete naKristu; kana tichitambudzika pamwechete naye, tichakudzwa vo pamwechete naye.
Vadzidzi vaJesu Kristu nhasi, vakazadzwa neMweya wake, ndivo vaya vari vana chaivo vavaporofita vanova madzibaba echokwadi ekereke.
Avo vanotenda kudzidziso yevapositora ndivo “vana” muchikamu chechipiri chaMaraki 4:6
Saka vapositora vekereke yekutanga ndivo “madzibaba” muchikamu chechipiri chaMaraki 4:6
Saka dudziro yaMaraki 4:6 ichitsanangurwa neMagwaro yakamira sezvinotevera;
MARAKI 4:6 Iye (Johane Mubapatidzi) achadzorera (achatendeutsa) mwoyo (kutenda) yemadzibaba (Israeri) kuvana (vadzidzi vakatevera Jesu Kristu paaifamba panyika) ne (zvino kwava nehumwe hushumiri apo Johane Mubapatidzi wechipiri anofanira kuuya kuzodzosa kana kuvandudza zvaimbovepo pakereke yekutanga) mwoyo (kutenda) yavana (vadzidzi vaJesu nhasi uno) kuna madzibaba avo ( dzidziso yavapositora kukereke yekutanga) kuti ndirege kuuyandirove nyika nokutuka (kutuka kwakaoma, iri ibhomba reatomi rinova mutangiri weAmagedhoni).
Hama Branham vakati:
Ndizvo zvakataurwa neBhaibheri chaizvo kuti zvichaitika mumazuva ekupedzisira, uye kudana kwaMaraki 4 “kuzodzosa kutenda kwevana kumadzibaba avo zvakare.” kumashure kwaizvozvo, vakaipa vakafamba … kana kuti vatsvene vakabuda pamusoro pemarasha evakaipa; pasi rese raizopiswa. Maatomi akarembera, kuva mabhomba kuzoparadza.
63-1124M NDINGAITEI NAJESU ANONZI KRISTU JEFFERSONVILLE.IN V-6 N-6 SVONDO
143 Asi kuna Maraki 4 akati, “zuva iro raJehova rinotyisa risati rasvika, apo nyika yose ichapisa kunge moto, vatsvene vachabuda vachifamba pamusoro pamarasha avakaipa,” ndiyo nguva yeMereniyamu, “Ndichatumira muporofita Eria.” Achasvikoitei? Achavandudza kutenda kwevana achivatendeutsira kumadzibaba vapositora,” kuvadzorera kuShoko. Anofanira kuva muporofita. “Ndichamutumira.”achazivikanwa zvakakwana. Kuita kwake kuchange kwakafanana nekwaEria chaiko. Shoko rake richange rakananga pamutsetse chaipo. Achapa mhosva, achawisira pasi. Hapana kuwadzana, hapana kutaurirana, hapana chiro, asi achange achiti ZVANZI NAJEHOVA.
64-0313 IZWI RECHIRATIDZO BEAUMONT.TX CHISHANU
354 Muri kuona kwatiri kuendaka, hamusi here? Nei? Eria wekutanga aive murume akarambwa nemakereke. Jezebheri naAhabhu ndivo vaive vatungamiriri vemakereke: kereke nenyika, zvese pamwechete. Eria akaburitsa pachena zvivi zvaAhabhu pamberi pake akaraira kereke yese kuti idzokere kuchokwadi cheShoko.
Kana zvisiri izvo zvinofanira kusvikoitwa naEria wechipiri paachauya kukereke ino nhasi: kuvandudza kutenda kwekutanga. Handioni kuti uchabva kwazviri sei. Ndizvo chaizvo. Dzokerai kuShoko rechokwadi. Ndizvo chaizvo.
63-0321 CHISIMBISO CHECHINA JEFFERSONVILLE IN CHINA
Kana tikadzokera kune zvakataurwa nehama Branham mumavambo mechidzidzo chino, zvinokwanisa kuva nyore kuti titi basa remutumwa wechinomwe nderekuvandudza nekudzosa vanhu kuShoko raMwari. Asi kana tikafananidza kutaura uku nezvinotaura Bhaibheri tinoona kuti hakusi kuvandudzwa kweShoko asi kuvandudzwa kwekutenda Kwevanhu mune zvinotaurwa neBhaibheri Shoko raMwari. Zvaitaurwa Nehama Branham chaizvo zvinotambanudzwa mukutaura kwavo kwakabatwa kutatu kwekupedzisira uye izvi zvose zvinofanana nezvakataurwa neBhaibheri.
Asi nei Shoko raMwari risingakwanisi kuvandudzwa?
MAPISAEMA 12:6 Mashoko AJEHOVA maShoko akachena; sesirivheri yakaidzwa mubisiro panyika, yakanatswa kanomwe.
7 Muchavachengeta, JEHOVA, muchavachengeta parudzi urwu nokusingaperi.
MATEO 24:35 Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri.
Shoko raMwari haringarasiki kana kushanduka, tinorasikirwa chete nekutenda kwedu mushoko raMwari nekuda kwekuita kwekurasisa kwaSatani kwakangwara.
Asi nei tichisimbirira panyaya diki yakadai?
Kana uchitenda kuti mutumwa wechinomwe basa rake nderekuvandudza Shoko raMwari zvino unozotenda kuti izwi rega rega rataurwa nemutumwa wechinomwe rakaringana neShoko raMwari. Mubvunzo unobva wava wekuti: nheyo yako chaiyo yaunovaka pairi ndeipi? Uchaiedza sei kuti uone kuti kutenda kwako ndekwechokwadi? Uchasimbisa kutenda kwako mukutaura kwemunhu anoora here uyo anokundwawo nekukanganisa, kana kuti paShoko raMwari Wokubwinya kukuru?
Rangarirai kuti pachadzoka Jesu Kristu achatarisa zvamunotenda mazviri, mudzi wekutenda kweyu umbori chii?
RUKA 18:8 ... Asi kunyangwe zvakadaro mwanakomana wemunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Chidzidzo chatinofanira kudzidza ndechekuti chese chinotaurwa nemutumwa wechinomwe chinofanirwa kudzoserwa kuBhaibheri toona kuti ichokwadi here. Kana zvichienderana totenda mazviri, kana zvisigaenderani, siyana nazvo. Vaka kutenda kwako paMagwaro, Bhaibheri, kwete pamashoko akataurwa akabatwa kubva kuHama Branham.
Kana kurudziro isingaenderane neBhaibheri, yakaipa. Mazviona here? Zvinofanira kubva muBhaibheri. Zvisinei kuti ikurudziro yei, zvinofanira kubva... Heinoi nheyo yaMwari. Hakuna imwe nheyo yakaitwa asi iyi. Uye kuti chii, kana ndichifambirana neizvi, ungati mashoko angu manyepo, nekuti ichi ndicho chokwadi. Maona, mazviona here? Kana mutumwa akakuudzai chimwe chinhu chakasiyana neizvi , Pauro akati, “Regai apiwe mhosva.” kunyangwe mutumwa wechiedza... Zvino kwave nezvimwe zvinhu zvikuru. Ini ndinongo... ndinosarudza mazuva maviri, ' nekuti kusvitsa nyaya iyi kuvanhu, ndinezuro nanhasi, pamusangano kwemasikati.
KUIPA MUKUFAMBA KWEZVINHU MUCHITENDERO CONNERSVILLE IN DE 41-78 CHIPIRI 53-0609A
6. Zvino, handisi kuedza kupamba masimba kana zvimwewo zvakadaro, asi, munoona, murume kana chimwewo chinhu chine misoro miviri pachiri, hachizivi kuti chingaende sei. Mwari havana kubvira vava nemisoro miviri kukereke yavo, havana kubvira vadaro, musoro mumwechete. Akafamba nemazera ese semadzidziro atinozviita muMagwaro, ane munhu mumwechete waanoshanda naye. Nekuti ukaona vanhu vaviri unoita pfungwa mbiri. Zvese zvinofanira kuzodzokera kumukuru mumwechete, mukuru wangu iShoko, Bhaibheri, ini semufudzi wekereke, mukuru wangu iShoko, uye ndinoda ... ndinoziva imi hama, munoita semunotarisira kwandiri semukuru wenyu kune chii ... chero ndichiri kuteera Mwari sezvakataurwa naPauro muMagwaro, “Nditeverei , sezvandakatevera Kristu.”
HURONGWA HWEKEREKE JEFF IN COD CHINA 63-1226
VAGARATIA 1:8 Asi kunyangwe isu, kana mutumwa unobva kudenga, akakuparidzirai Evangeri, inopesana neyatinokuparidzirai isu, ngaave wakatukwa.
9 Sezvatakamboreva, zvino ndinorevazve saizvozvo: kana kuno munhu unokuparidzirai imwe Evangeri inopesana naiyo yamakagamuchira, ngaave wakatukwa.
10 Nokuti zvino ndinoita vushamwari navanhu here, kana naMwari, kana ndinotsvaka kufadza vanhu here? Kana ndaifadza vanhu nazvino, handizaiva muranda waKristu.
11 Nokuti ndinokuzivisai, hama dzangu, kuti Evangeri yakaparidzwa neni, haina kuita seyavanhu.
12 Nokuti handina kuipiwa kana kuidzidziswa nomunhu, asi ndakairatidzwa naJesu Kristu.
Hama Branham havakwanisi kudzidzisa chero chinhu chisina kudzidziswa naPauro uye basa rake guru nderekuvandudza nekudzora vadzidzi vaJesu vanhasi kunheyo yedzidziso yaPauro. Hama Branham havangataure chero chinhu chakasiyana nezvakataurwa naPauro nekuti hatingavandudzwi. Hatidi zvinhu zvitsva, tinongoda zvaivepo pakereke yekutanga.
11 Nokuti hakunomumwe ungaronge dzimwe nheyo, asi idzo dzakarongwa kare, ndiye Jesu Kristu.
Ishe Jesu Kristu vakukomborerei.